Raisalwasaare Hailemariam Desalegn oo amaanay shacabka DDSI iyo Hogaamintiisa - Cakaara News
Raisalwasaare Hailemariam Desalegn oo amaanay shacabka DDSI iyo Hogaamintiisa
Adhisababa (cakaaranews)Talaado 5ta July 2016. Raisal wasaaraha JDFI mudane hailemariam desalegn ayaa warbixintii sanadlaha ahayd ee uu usoo jeediyay golaha wakiilada shacabka dalka ku amaanay shacabka, DDSI iyo hogaamintaba isagoo hoosta kaxariiqay in deegaanka soomaalida itoobiya uu kajiro horumar laxaad leh oo ku yimid kago’naanshinyo ay layimaadeen bulshada deegaanka, xukuumada deegaanka iyo ta dalkaba. Waxaana tusaale loo sooqaadan karaa in sanadkan ay xukuumadu xooga saartay dhanka biyaha gaar ahaan biyo xidheenada waawayn, iyo xidhiidhka dadwaynaha dal iyo dibadba.
Raisal wasaare hailemariam ayaa sidoo kale sheegay in hogaaminta deegaanku ay usii jeedo dhanka horumarka iyo waliba inaan maanta deegaanka lagu tilmaami karin in uu kamid yahay deegaanada dib u dhacsan balse uu yahay mid dawlad deegaanada kale ee dalku ay kudaydaan oo ay khibradaha ugu badana kaqaataan gaar ahaan dhanka kashaqaysiinta xirfadlayaasha iyo islahaysiinta shaqadooda. Wuxuuna xusay in dhanka xidhiidhka dadwaynaha dal iyo dibadba uu deeegaanku mudan yahay in lagaga daydo khibrad wayna laga qaato.
Ugudanbayna raisal wasaaraha dalka mudane hailemariam desalegn ayaa carabka ku adkeeyay in deegaanka lagaga daydo dhanka ururinta biyaha gaar ahaan biyo-xidheenada, barkadaha, qodida ceelasha dhaadheer iyo dhismayaashaba taas oo uu sabab uga dhigay interpriseyada kaladuwan ee uu deegaanku samaystay. Wuxuuna raisal wasaaruhu hadalkiisii kusoo xidhay in kadib markii deegaanku ku filaaday nabadgalyada deegaanka iyo xuduudaha dallkaba uu caawin nabadgalyo kadhalin kagaysanayo wadamada aan dariska nahay sida soomaaliya. Raisal wasaaraha ayaana magadcelin balaadhan usoo jeediyay dhamaan shacabka, xukuumada deegaanka iyo XDSHSI isagoo ku booriyay inay dadaalkooda sii laba jibaaraan.